avelelwe Administrative isilinganiso isijeziso, esetshenziselwa ezithile amacala zokuphatha. It kubhekwa elawula kunazo zonke izinhlobo Isijeziso lezi zenzo. avelelwe Administrative - bokuhlukaniswa ukukhululeka kwesikhathi esithile. Isikhathi isikhathi esibalulwe isinqumo efanele esimweni icala.
Lokhu isigwebo osebenza ku izinhlangano eningena ngala noma ezinye izinhlobo ubudlelwane zokuphatha, ukwenza amacala ngesikhathi esifanayo ukuthi sekuseduze ukuba namacala kuchazwe umthetho yisigebengu akusho ukumela okukhulu ingozi emphakathini. ukwephula okunjalo, ikakhulukazi, zihlanganisa isitoreji noma ukuthengwa nezidakamizwa (esincane), ukusetshenziswa kotshwala endaweni yomphakathi, ukuziphatha ngokungafanele, ukubukeka indoda endaweni yomphakathi ngenkathi didekile okuyinto ephambene kwezinkambiso zokuziphatha, kanye nezinye izenzo okwenziwa umuntu kabili phezu ngonyaka ukuze ajezise ngoba kokuvela odakiwe noma ukuphuza utshwala ezindaweni zomphakathi.
avelelwe Administrative inikezwa kunjalo yokungalaleli eziphikelelayo izimfuno ngokomthetho noma oda elinye iphoyisa.
Isilinganiso isigwebo esibekiweko ikhotho, umyalo we funa ngokomthetho noma oda Umnyango wamaphoyisa, wezempi noma omunye umuntu ezigunyaziwe ekwenteni imisebenti yabo endaweni umngcele.
Kufanele kuqashelwe ukuthi avelelwe zokuphatha sisetshenziswa ngokuhambisana isinqumo sejaji. Lokhu sahlulelo sokugcina futhi ngendlela ukukhiqizwa izimo ezifanele ayikwazi isikhalo. Ngemva isimemezelo isijeziso ngokushesha iphoqelelwe, kungakhathaliseki ukuthi isigaba ukuhlukumeza.
avelelwe Administrative kuhilela umsebenzi ngokomzimba ngaphandle kwenkokhelo (yokuhlanza ezitaladini, izindawo zomphakathi, amakhaya kanye nabanye). Kule ndaba, isijeziso ayikwazi ukusetshenziswa kwabancane, abesifazane abakhulelwe, abantu besifazane nezingane ezincane (kufika ku eyishumi nambili ubudala), amaqembu ekhubazekile lokuqala nelesibili.
Kulandela isinqumo senkantolo kuletha umuntu onikezwe isilinganiso ekujezisweni, ATS isetjentiswe. A umamukeli ekhethekile noma indawo avelelwe yesikhashana lowo okonile esitokisini kuze kuphele isikhathi lapho kunqunywa kwesinqumo senkantolo. Imibandela zihlanganisa ukusetshenziswa umbuso olukhethekile izinyathelo emisebenzini futhi nomthelela ezemfundo.
Mode, equkethe umhlaseli, kunikeza ukwahlukanisa iphinde ivimbele amagoli futhi entsha izenzo eziphambene nomthetho amahlumela. Ukusebenzisa ngokuqondile izimo olukhethekile indlela imfundo kanye nokulungiswa. Lezi zihlanganisa, ngokukhethekile, zihlanganisa nokusetshenziswa kwabasebenzi.
Isikhathi avelelwe zokuphatha kufakwe isikhathi ukuboshwa.
Ngemva yokukhululwa umuntu isitifiketi mayelana nesikhathi sokuboshwa, ubunjalo ukuhlukumeza, okuyinto kwalandelwa isijeziso.
Ukusungulwa ukuboshwa tekuphatsa irekhodi lobulelesi akuveli, hhayi imbangela kwemsebenti, kanye akusho ukuphazamisa ubudala. Kulokhu, isikhathi sokuhlala ekuphetheni inkokhelo endaweni yomsebenzi unomphela ingakhokhwa.
avelelwe Administrative kungenzeka onikezwe impahla yomuntu ekukhokheni yokukhokha izintela noma ezinye izinkokhelo oyisibopho kuya amabhajethi ezihlukahlukene. Kulesi simo isisekelo isicelo isijeziso kungenzeka oda amaphoyisa yentela yombuso. Ukusungulwa yeziboshwa zokuphatha Kwenziwa okusekelwe ukugcwaliseka elandelayo amafa umyalo ofanele. Ngakho, kuhloswe ukuqinisekisa irisidi ngesikhathi esifanele amanani ezidingekayo izimali ezifihlekile, izintela kanye nezinye izinkokhelo saziso.
Banana - isithelo noma amajikijolo, utshani noma isihlahla?